Real Madrid oo la garaacay kulankeedii ugu horreeyay ee Saaxiibtinimo CR 7 La’aantii+SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo la garaacay kulankeedii ugu horreeyay ee Saaxiibtinimo CR 7 La’aantii+SAWIRRO
CR Shariif August 1, 2018
( USA ) 01 Agoosto 2018. Kooxda seddaxda jeer xariirka noqotay horyaalka yurub ee Real Madrid ayaa guuldareystay kulankii u horreeyay ee cayaaraha saaxiibtinimo oo ay dheelaan Ronaldo la’aantii.
Laacibka Cristiano Ronaldo ayaa sagaal sano kaddib ka dhaqaaqay kooxda ka dhisan gegida santiego Bernabeu isagoo £100 milyan oo gini ugu biiray naadiga talyaaniga ee Juventus.
Sido kale waa markii u horreeysay uu kooxda leyliyo hogaamiyaha cusub ee Julen Lopetegui tan iyo markii uu shaqadaa iska casilay Zinedine Zidane.
Kulanka saaxiitinimo ee kamida tartanka sanad laha ee International Champion Cup ayay la cayaareen kooxda Manchester united waxaana looga badiyay 2-1.
Waa markii u horreeysay oo united ku adkaataa 90-daqiiqo kulamada tartankan hore waxay ula dheeshay kooxaha AC Milan oo ay rigoorayaal kaga badisay iyo guuldaro xun oo cayaartii labaad kasoo gaaray kooxda xifaaltanka soo jireenkaa uu kala dhaxeeyo ee Liverpool.
Labada gool ay United ku badisay waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Alexis Sanchez iyo Ander Herrera halka Real ay goolka calankaa ka heshay Karim Benzema kasoo dhaliyay daqiiqadihii dheeriga ee qeybta hore cayaarta.
SAWIRRO: Lionel Messi oo dib ugu soo laabtay tababarka Barcelona kaddib niyajabkii Koobka Adduunka
Labo laacib oo ka tirsan Real Madrid oo niyad jabiyay tababare Mourinho